Berbera magaalo aan la’aanteed Somaliland horumar gaadheen”Wasiir Suleiman Yusuf Koore | Mandheera News
Berbera magaalo aan la’aanteed Somaliland horumar gaadheen”Wasiir Suleiman Yusuf Koore
Berbera magaalo aan la’aanteed Somaliland horumar gaadheen.
Berbera magaalada dhaqaalaha ugu badan ee dalka Somaliland soo gala uu ka soo baxo. Waa lafdhabarta dhaqaalaha iyo horumarka dalka, oo ay dheer tahy geeska iyo jaarkba. Labada dhinac ee dhanka istaajiyada iyo dhicitaanka qaabka ay dhacdo magaalda berbera; iyo qaabka wax soo saarka dalka ay u leedahay iyo manacacaadka bulshada berbera iyo khayraadkeedu dalka u leeyihiin.
Dhanka xaadaarada, ilbaxnimada, iyo xidhiidhada caalmiga waa mid Berbera ay Somaliland horumuud ugu tahy. Hadan Berbera jirin wax badan baa qabyo iyo qarafo gali lahaa. Ilaahay mahadii waa bogacada Somaliland Alle ugu mahad naqdo in ay ka dhacdo dhul ahaan.
Wefti balaadhan oo ka socday Dalka jaarka nahy ee Dawlad Deegaanka Somalida Itoobiya ee “DDSI” oo Somaliland booqosho ku yimi ayaanu gaadhsiinay magaalda Berbera. Waxa si weyn loogu soo dhaweeyey Degmada Berbera oo dhamaan Masuuliyiintadu qaab fiican u qaabileen.